Louis Vuitton မှကမ္ဘာ့ဈေးအမြင့်ဆုံးဖိနပ် စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
စာသင်ခန်းယူပါ | | Calzado
10.000 ဒေါ်လာ (သို့မဟုတ်ယူရို ၇,၃၅၀) သည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီမှဖိနပ်များကျိုးနပ်သည် Louis Vuitton, က၎င်း၏ catalog ထဲမှာရှိခြင်း၏ဇိမ်ခံဂုဏ်အသရေကိုပြသသောအခြားမဖြစ်နိုင်ဘူး ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးဖိနပ်။ အထူးသကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆို ရစ်ချယ်ယယ်မန်ဟက်တန်သည်ဖယောင်းမိကျောင်းသားရေဖြင့်ပြုလုပ်သည်တံဆိပ်၏နွေ - နွေရာသီစုဆောင်းခြင်းပိုင်။
ဒါဟာမိကျောင်းရှိပါတယ်; ဒါစျေးကြီးတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိပ်မှာထည့်လျှင် သားရေတို့၏အမဲဆီ, ချုပ်, အဖောက်ဖောက်ခြင်းနှင့်လက် - ခြယ်သားရေဖိနပ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့ Louis Vuitton ruthenium plate ကိုဖနောင့်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင်စျေးကတော်တော်လေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကန့်သတ်ထားတာပဲ။
အခြားသတိပညာရှိအသုံးအဆောင်များအတွက်မိကျောင်းကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်မှာမှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖိနပ်အတွက်ဖြစ်သည် အလွန်အကျွံစားပြီး ဤရွေ့ကားသော်လည်း မိကျောင်းများအတွက်လုံလောက်သောသတိပညာ) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဖိနပ်အတွက် pesetas အဟောင်းများကိုတစ်သန်းကျော်ပေးဆပ်ရန်အလွန်အမင်းထင်ရသော်လည်းသင်မော်ဒယ်ကိုနှစ်သက်သည်။ နွားရုပ်လည်းရှိတယ် နှင့်ပတ်ပတ်လည် "သာ" 500 ယူရို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » Calzado » Louis Vuitton ကကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးဖိနပ်ဖြစ်သည်
ငါကမိကျောင်းဖိနပ်နဲ့တူတူပဲ။ ဒါပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့ဖိနပ်တွေအတွက်၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Tom Ford ရဲ့နေ့ကမက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာငါသုံးပွင့် B ကိုရှာနိုင်မလားဆိုတာရှာနေတာ။ ပြီးတော့သူ့နွားသငယ်ဖိနပ်လေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ မိကျောင်း ၃၅၀၀ နဲ့ ၄၀၀၀ မှာမိကျောင်းမရှိဘူး။ သူတို့က Python, အုန်းသီးသို့မဟုတ်ငှက်ကုလားအုတ်ဖြစ်ပါကစိတ်ကူးမထားပါနဲ့။ သူတို့ဟာယူရို ၃၀၀ ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဘေးမှာရှိနေပြီး Tom Ford ကလက်မှတ်ထိုးထားသူအားလုံးကအဲဒီစျေးနှုန်းတွေကိုတိုက်ဆိုင်စွာမတွေ့မချင်းဒီအမှားလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ထိုက်တန်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်းရာသီဥတုနှစ်မျိုးဖြင့်ဖိနပ်များကိုမည်သည့်အခါမျှ ၀ ယ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အစဉ်အလာပိုမိုရှိသောအခြားကုမ္ပဏီများသည် ၁၀%၊ ထိုသူတို့နှင့်သင်အဆိုပြုထားသူများအတွက်အဆင်ပြေသောအခါအလွန်ကြွယ်ဝသူများကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
တစ် ဦး ကပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်ဤကဲ့သို့သောဆက်လက်
Javier R ကို, ဟုသူကပြောသည်
ဤဖိနပ်၏စျေးနှုန်းမှာအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ တံခါးဖွင့်ခြင်းသည်မိကျောင်းသားရေနွားများကဲ့သို့ဈေးပေါသည်၊ တစ် ဦး တည်းသောလက်ဖြင့်လက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်ချုပ်သော်လည်းသော်လည်းကောင်းယူရို ၅၀ ပင်မတက်ပါ။ Crocodile အရေပြားဟာစျေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အောက်စ်ဖို့ဒ်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုမပါရှိပေမယ့်သူတို့ကအရေပြားကိုအများဆုံးအသုံးပြုတယ်လို့ပြောကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က Manolo Blahnik မိကျောင်းအရေပြားဖိနပ်၊ ဂန္ထဝင်မာရီယိုမော်ဒယ်လ်အချို့ကိုမှာယူတဲ့အခါမှာယူရို ၃၀၀၀ ထက်မကပေးရတာကိုကျွန်တော်သတိရမိတယ်။ Vuitton တောင်းသော 50 ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ ဒါတောင်မှသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးလို့မထင်ဘူး၊ ဈေးလည်းကြီးတယ်။ Jesus Cánovasတွင်ဈေးကြီးသောဖိနပ်များရှိသည်။
Javier R ကိုပြန်သွားပါ။
ဤကဲ့သို့ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသည်ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ကိုသူ့ဟာသူအခိုင်အမာပြောဆိုရန်အလွန်အမင်းလိုအပ်နေပုံရသည်။ လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ "လက်လှမ်း" ဇိမ်ခံဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားသောသူတို့နှင့်ကွဲပြားခြားနား။
alejandra sepulvera castro ၁၁၉ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ငါဒီဖိနပ်ကအရမ်းကြိုက်ပေမဲ့တော်တော်လေးစျေးကြီးပေမဲ့ ps ယောက်ျားတွေအတွက်ပဲ။ ငါမိန်းမပဲ။
alejandra sepulvera castro 119 အားပြန်ပြောပါ
ငါသူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်စျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းမကြိုက်ဘူး ???? hahahahahaha Update လုပ်ပါ
Self-tanning creams, သင်သိရန်လိုအပ်သည်